Imininingwane kaPitbull Husky Mix: Konke Mayelana nePitsky - Izinhlobo
Uyakuthanda ukugonwa yizinja ezinkulu? Noma wake wafuna uHusky waseSiberia? Kuthiwani ngePitbull?
Ngeke kusamele ukhethe ngenxa yenhlanganisela yePitbull-Husky! Ukuxubana okugcwele isimanga, inhlanganisela yePitbull-Husky noma iPitsky nakanjani izongenisa inhliziyo yakho ngayo ukwethembeka nobungane .
Uhlobo olunjani lwenja iPitsky?
Izici zePitbull Husky Mix
Ukuqeqeshwa okufanele kwePitsky
Ngabe i-Pitbull-Husky hybrid idinga ukuzivocavoca okungakanani?
Ngabe izingxube zePitbull Husky ziyachitha?
Izingqinamba ezingaba khona zezempilo ze-Husky Pitbull Mix
Ngingayithola kuphi iPitsky?
Isithunzi esikhulu: usukulungele lokhu kuqhekeka?
Ukufunda Okuqhubekayo: AmaMixes amaningi weSiberian Husky
Inhlanganisela yePitbull Husky ingazwakala ingajwayelekile, kepha le hybrid akuyona inja entsha yomklami.
IPitsky ingumkhiqizo wokuzala izimbali i I-American Pit Bull Terrier noHusky waseSiberia noma u-Alaskan Husky.
Ngeshwa, ngenxa yohlobo lwayo oluxubekile, le ngxube akaziwa yizinhlangano ezifana ne-Dog Registry of America noma i-American Kennel Club (AKC).
Kubazali bomxube kaPitbull Husky, nguSuserian Husky kuphela owaziwa yi-AKC.
Awucabangi ukuthi kuyathakazelisa ukuthi i-Pitsky puppy izobukeka kanjani? Kungabukeka kakhulu njengomzali we-Husky noma ngaphezulu komzali wePitbull?
Into eyodwa iqinisekile, uzoba ngumnikazi we kakhulu ukubukeka okuhlukile kepha kuhle inja!
Noma izinhlobo zomzali wayo zivame ukuba nedumela lokuba nolaka, ungayihluleli iPitsky zisuka. Ngokuqeqeshwa okufanele kanye nokuxhumana nabantu, zonke izinja zingakhuliswa zibe unothando futhi uthembekile abangane.
Ake sibheke ukuthi le hybrid ivelaphi futhi sifunde ngabazali bayo: i-Husky yaseSiberia kanye ne-American Pit Bull Terrier.
Yize zithathwa njengohlobo olunolaka, amaPitbulls noma amaPitties anobungani ngokweqile ngokwemvelo futhi akholelwa ukuthi wonke umuntu uyawathanda.
Impela, amaPitties anjalo unesibindi, uyazethemba, futhi unamandla , kodwa futhi bathembekile, banothando, futhi bayiphupho lokuziqeqesha ngenxa yobuhlakani babo!
Ungacabangi ukushiya le nja yodwa isikhathi eside njengoba bengathola ukukhathazeka ngokwehlukana. Bazodlala ngokukhonkotha futhi bangalimaza, bahlafune izicathulo, okhaphethi, noma ifenisha imbala.
Ngokuvamile, lolu hlobo lungakhula phakathi kwamasentimitha angama-43 kuye kwangama-43 futhi lungaba nesisindo esingamakhilogremu angama-39. Ungalindela ukuthi le nja ibe khona kuze kube yiminyaka eyi-16.
Lapho kukhulunywa ngalolu hlobo, mhlawumbe usuqale ukucabanga ngalezo zinja ezinhle zeqhwa ngamehlo ahehayo! Ama-Huskies ayaziwa ngokuba inobungane, inothando, futhi iyadlala , futhi bajabulela inselele yokusebenza ngokomzimba nangokwengqondo.
AbakwaSiberian Huskies ube nesikhathi sokuphila esifinyelela eminyakeni eyi-15. Zingaba nesisindo esingamakhilogremu angama-27 futhi zingamasentimitha angaba ngu-51 kuye kwangama-61 ubude.
Njengoba bethanda ukuba matasa, ngeke bakwazise uma besala bodwa noma benesithukuthezi. Huskies kukhona abaculi abaphunyukayo abahle kakhulu lokho kuzomba noma kugxume ukuphuma kwabo!
Uma kungenjalo, zilungiselele ukuhlafuna okuningi nokuhhewula kubo.
Ungalindeli ukuthi uHusky angaba amazambane okusofa, noma kunjalo. Abazalelwanga ubuvila futhi bathanda ukuba wusizo kubantu babo, ngakho-ke lokhu kuyinto enhle kakhulu iyasebenza zala.
Banomusa emndenini wabo, kodwa futhi bangakuxwayisa uma ngabe kukhona uphawu lwengozi.
Ama-Alaska Huskies ( umthombo )
Musa ukudida U-Alaskan Husky nge-Alaskan Malamute .
I- U-Alaskan Husky kungokuhlukaniswa okuningi kukaHusky kunokuba kube ngohlobo lwayo oluhlukile. Zifana nakanjani nezinye izinja zohlobo lwe-Husky.
(I-Alaskan Malamute, ngakolunye uhlangothi, uhlobo lwayo uqobo, olwaziwa njengenja esebenzayo yi-AKC.)
Ngokwakhiwa okuthe xaxa kakhulu, i-Alaskan Husky yaziwa nge- amandla nokusubatha .
Le nja yakhelwe umjaho wezihlibhi neminye imisebenzi elindelwe kuma-canine ase-Arctic.
Njengoba iPitsky ingaba ukuxubana kwePitbull noma i-Alaskan Husky noma iSiberia Husky, lokhu kubukeka nosayizi we-hybrid kungahluka.
Imvamisa zinenhloko ebanzi, izindlebe ezimile, amehlo amise okwe-alimondi, nesifonyo eside, nomzimba wazo mfushane, icwecwe, futhi iqinile .
Iningi lamaPitskies livame ukuba nalo amajazi amnyama ngemibala emnyama nsundu, emnyama, noma imbenge.
Uma ijazi likaHusky-Pitbull lesiphambano lifana neleHusky, khona-ke belingaba loboya futhi libe lide. AmaPitskies alandela umzali wabo wePitbull azoba nejazi elibushelelezi, elifushane.
Uma ubheke izithombe zomxube we-Husky Pitbull, ungabona ukuthi iningi lala maPitskies alizuze kanjani ifa amehlo ahlabayo yomzali wabo uHusky.
Ziyizinja eziphakathi nendawo ezinkulu
Umxube wePitbull Husky uyi-hybrid ephakathi nobukhulu obukhulu ongaba nesisindo esiphakathi Amakhilogremu angama-30 kuye kwangama-70 (14 to 32 kg) futhi ingafinyelela ubude be- Amasentimitha angu-19 kuya kwangu-21 (48 kuya ku-53 cm) ubude.
Usayizi wePitsky wakho usazoncika ekubukekeni kwabazali bayo. Zingaba zinde noma zibe mfushane, noma zize zibe nesisindo Amakhilogremu angama-80 (36 kg)!
Banobungane futhi banomoya omnene
Njenganoma iyiphi enye inja, akufanele usheshe ekutholeni iPitsky.
Njengoba sishilo ngaphambili, ukuvame ukuwela ngokuvamile okungaqondakali mayelana nobumnene. Isiphambano sePitbull-Husky singahle sibucayi ukubhekana naso uma siqhathaniswa nenja emsulwa.
Izinhlobo eziningi ezihlanganisiwe zizobonisa imikhuba eziyitholile kubazali bazo.
Kodwa-ke, ukuthi inja yakho iziphatha kanjani akuxhomekile emvelweni wayo kuphela kepha nakuyo indlela owondla ngayo umdlwane wakho .
Lokho kusho, inhlanganisela kaHusky Pitbull ngokuvamile inesimo esilinganayo. Lokhu kuhlukaniswa okuthile kungu enobungane nothando , benza abangane abakhulu.
Enye inkinga engaba khona ngomxube wePitbull Husky ukuthi ingavikela kakhulu iphakethe layo lomuntu, okuholele ku- ukukhonkotha ngokweqile .
Le nja ngeke inqikaze ukusebenzisa izwi layo ukukuxwayisa ngokushesha ngezinsongo ezibonakalayo noma abantu ongabazi emnyango.
Izinhlamvu ze-Husky-Pitbull zidinga ukunakwa okuningi, futhi akufanele neze uvumele ukukhathazeka kwabo ukwahlukana kunqobe.
Isitimela sekhreyithi umdlwane wakho wePitsky usemncane ngakho uyazi ukuthi unendawo ephephile noma ungamshiya yedwa. Lokhu kuzobenza bangazilimazi futhi kugcine nokuphepha kwendlu yakho.
Ziyizilwane ezifuywayo ezinhle kakhulu zomndeni nezinja zokuqapha
Uma umndeni wakho unezingane noma ezinye izilwane ezifuywayo, isiphambano sikaHusky Pitbull singaba njalo inja yonogada emangalisayo .
Bazokwenza umsebenzi omuhle wokubuka nokuvikela izingane zakho. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ungahamba futhi ushiye abancane bakho kumngane wakho onoboya!
Ukuphepha, ungalokothi ushiye ingane yakho inganakiwe noma nini lapho inhlanganisela yakho yePitbull Husky iseduze.
Akungoba iPitsky yakho ingenza ngamabomu noma yini eyingozi ezinganeni zakho, kodwa inja yakho ingahle ingazazi amandla ayo ngenkathi udlala nezingane ezincane.
Ngosayizi waso, isiphambano sikaHusky-Pitbull singashaya ingane yakho ngengozi ngesikhathi sokudlala.
Bona ukuthi i-pup yakho ihlangana nabantu kusenesikhathi ukuze uqiniseke ukuthi iPitsky yakho izwana nawo wonke umuntu osendlini.
Njenganoma yiluphi uhlobo lwezinja, iPitskies idinga ukuba njalo baqeqeshwe kusenesikhathi , njengoba bemukela kakhulu lapho bengamazinyane.
Qala ukuqeqeshwa i-Husky Pitbull mix pup yakho uma iseduze Amaviki ayisithupha kuya kwayisikhombisa ubudala . AmaPitskies ahlakaniphe ngendlela emangalisayo, ngakho-ke azolanda imiyalo yakho kalula.
Bheka lesi siphambano esenziwa nguHusky noPitbull:
Gxila isikhathi sakho ekuqeqesheni nasekuzijabuliseni inja yakho. Izingxube zePitbull-Husky ziyizo intando enamandla , kepha ukuqiniswa okuhle kusebenza kangcono kunesijeziso ngoba lezi zinja ziphilela ukujabulisa abanikazi bazo.
Vumela uPitsky wakho achithe isikhathi azungeze abanye abantu nezilwane ukubasiza ukuthi bafunde ukuthi akubona bonke abantu abafuna ukukwenza noma yikuphi ukulimaza.
Kokubili iPitbull neHusky kunjalo amandla aphezulu izinhlobo, ngakho-ke kuyaqondakala ukuthi iPitsky inamandla amaningi futhi.
Umxube wePitbull Husky ubhukuda ngaphambili ( umthombo )
Amamiksi kaPitbull-Husky thanda ukuba ngaphandle - lina noma likhanya - futhi liphelele emindenini esebenzayo noma ematasa. Yilungele ukuchitha cishe amahora amabili ngosuku wokusebenza ne-Pitsky yakho ukubagcina bejabule futhi belungile.
Qiniseka ukuthi ugcina isiphambano sakho sePitbull noHusky ku-leash noma nini ngaphandle. Le nhlanganisela ingazuza njengefa idrayivu yempango yomzali wayo wasePitbull.
Amathoyizi amahle kakhulu we-Husky ne-Pitbull mix
Zonke izinja zinokuthambekela kwemvelo kokuhlafuna, kepha manje siyazi ukuthi iPitskies ingaletha ukuhlafuna kube sezingeni elibi kakhulu.
Uzokuqaphela lokhu ezimweni lapho ungeke wanelise isidingo sabo sokuzivocavoca umzimba nengqondo. Yilapho ukuhlafuna amathoyizi kusebenza khona.
Noma ngabe bangaphakathi kwekreyithi labo noma cha, qiniseka ukuthi unikeza ithoyizi elihlafunwayo elingabambelela kule ndlela yokuwela imihlathi namazinyo aqinile . Khetha ithoyizi elikhulu elizokwazi ukuliphatha futhi elingeke ligcine ngokuba yingozi yokuklinya.
Njengoba i-Pitbull noma i-Husky ingeyona inzalo ephansi, ungathembela kuPitsky to chitha inani elilinganisiwe yoboya.
Lokhu mhlawumbe akuyona inja engcono kakhulu ongayithola uma uhlushwa ukungezwani komzimba nedander .
Njengoba sishilo ekuqaleni, ubukhulu nobude bejazi lokuxuba lePitbull-Husky kuncike ekutheni kuthatha ngemuva kwePitbull noma iHusky.
Uma ijazi likaPitsky wakho lide futhi lithatha umzali kaHusky, kuzodinga ukuxubha nsuku zonke .
Uma izuza njengefa ijazi elifushane lePitbull, uyihlikihle kanye ngeviki kuzokwanela.
Ungakhohlwa ezinye izisekelo zokuzilungisa njenge ukusika izinzipho zabo lapho kudingeka, ukuxubha amazinyo abo kaningana ngesonto, nokuhlanza izindlebe njalo emasontweni amabili!
Gcina isikhunta noma isikhunta kude ngokuqinisekisa ukuthi ingubo yangaphansi yenja yakho iyoma ngokuphelele ngemuva izindawo zokugeza .
Yize inhlanganisela yePitbull-Husky inamandla aphezulu, uzofuna ukubheka isisindo senja yakho. Hlela futhi uhlele ukuphakelwa kwabo ukuze uqiniseke ukuthi bayimiqemane.
Uma ungazi ukuthi ikuphi ukudla ukunikeza inja yakho, okumele ukwenze nje ukubonana nodokotela wezilwane noma ukubuza umfuyi. Lokhu kuyasiza kakhulu ekuvikeleni umdlwane wakho wePitsky ekutholeni isisu esithukuthele.
Ngokuya ngeminyaka yayo, lolu hlobo ludinga 600 kuya ku-1,400 ama-calories ngosuku. Lokho ngama-calories angu-20 ngesisindo somzimba.
Okungenani Izinkomishi ezi-3 kuya kwezi-4 zokudla kwezinja ezomile ezisezingeni eliphakeme , kuhlukaniswa kabili ukudla okuyisisekelo ngosuku, kuyadingeka. Ungayincishi ngokweqile inhlanganisela yakho yePitbull-Husky, kodwa qiniseka ukuthi ithola ukudla okwanele ukuze igcine indlela yayo yokuphila esebenzayo.
Ngokunamathela ekudleni okunconyiwe kwePitskies, ungasiza inja yakho oyithandayo ukuthi igweme ukukhuluphala ngokweqile nezinye izinkinga zempilo ngaphandle kokubaphuca izakhamzimba abazidingayo ukuze zikhule futhi zikhule.
Ungavimbela nokuzuza kwesisindo enjeni yakho ngokuyinika ukudla okungenazinhlamvu kanye nezithako ze-glucosamine gcina amalunga ayo eqinile futhi enempilo .
Ngenkathi abanye bethi izinhlobo ezivundlile ngokuvamile ziphilile ngenxa ye- umdlandla we-hybrid , lezi zinja nazo zingahlushwa izinkinga zempilo ezingase zibe khona ifa kubazali babo abangenacala.
Yingakho kubalulekile ukuthi sizifundise ukugcina izingane zethu ezinemilenze emi-4 zijabule futhi ziphilile.
Nazi ezinye zezinto ezikhathaza ezempilo okufanele wazi uma kukhulunywa ngomxube wakho wePitbull-Husky:
I-Hyperthyroidism - Le yinkinga ekhona kumaHuskies nakumaPitbulls womabili. Izimpawu zifaka phakathi izinkinga zokuphefumula nokuphefumula.
Qaphela lesi simo ngoba uma singatholi ukwelashwa ngokushesha, sizodala izinkinga eziningi ezinjengezinso nokuhluleka kwenhliziyo.
Ukungezwani komzimba - Zombili izinhlobo zabazali zisengozini yezinhlobo ezahlukahlukene ze izimo zesikhumba njengezifo zomzimba. Bheka inja yakho futhi, uma ucabanga ukuthi ukunwaya kwayo sekuya ngokungajwayelekile, sekuyisikhathi sokukhala noma uvakashele udokotela wezilwane ukuthola ukwelashwa okufanele.
Amanye ama-Pitbull Husky Mixes anamajazi amafushane, abenza bathambekele kakhulu ezimeni zesikhumba. ( umthombo )
I-Hip Dysplasia - Lesi simo sezakhi zofuzo singavela kumzali wePitbull. Njalo cela izikolo ze-hip zabazali ngisho nezinsana ngaphambi kokuzithola.
Izinkinga Zamehlo - Izinhlobo zabazali bakaPitsky zisengozini yezimo ezahlukahlukene zamehlo. Ama-Huskies angathola i-cataract, kuyilapho ama-Pitbulls ethambekele ekutholeni i-retinal dysplasia.
Isifo senhliziyo - Lokhu kungenzeka futhi lapho inja yakho ithola amadala . Ungazama ukugwema lokhu ngokuqinisekisa ukuthi ubuka ukudla kwenja yakho futhi uyinikeze ukuzivocavoca umzimba okwanele nsuku zonke.
Uma unikezwe ukunakekelwa okufanele nempilo enempilo, ukuhlanganiswa kwePitbull neHusky kunesikhathi sempilo ye- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15 .
Kuyalulekwa futhi ukuthi uthathe inja yakho uye nayo kudokotela wezilwane okungenani kabili ngonyaka ukuhlolwa okujwayelekile. Ukuvimbela kuyindlela enhle yokugcina isilwane sakho sinempilo!
Manje kuza ingxenye enzima: ngifuna inhlanganisela kaPitbull Husky ozoyithatha ekhaya futhi uyithande.
Noma ngabe uthatha isinqumo sokuthenga umdlwane wePitsky noma ukuhlenga i-Pitbull-Husky hybrid, hlola okwenja amaphepha nokususwa kwezempilo .
Noma kulula ukuthola izinja eziklama kulezi zinsuku ngenxa ye-Intanethi, ngaso sonke isikhathi kungcono kakhulu ukuthi uqaphele futhi uqiniseke ukuthi abazali be-pup yakho, ikakhulukazi iPitbull, bacacile ngezinkinga zempilo.
Abafuyi abaphethe iPitsky baqinisekisa ukuthi amazinyane abo ahlala futhi akhule endaweni ephephile, ehlanzekile.
Inketho # 1: Pitbull Husky mix midlwane evela kubazalisi
Qiniseka ukuthi uthenga inja yakho entsha kubalimi abahlonishwayo. Lindela umdlwane wePitsky ukuze ubize $ 500 kuya ku- $ 2,000 .
Amanani ayahluka ngokuya ngozalo lomdlwane nakuzalisayo uqobo. Lokhu akubandakanyi zonke ezinye izindleko ezivelayo uma usuthole umdlwane.
Izinqubo eziyisisekelo ze-vet zomfundi wakho zingabiza nxazonke $ 485 kuya ku- $ 600 njalo ngonyaka. Uma sithi izinqubo eziyisisekelo, sisho ukudubula, ukuhlola, nokuvimbela amazenze.
Ungabheka imidlwane yePitsky edayiswa ku- Imidlwane yaseGreenfield futhi Imidlwane yaseLancaster . Ungathintana nalaba bazalisi bePitbull nabakwaHusky abalandelayo ukuze ubone ukuthi abanawo yini ama-crossbreeds athengiswayo:
AmaKennels amakhulu eGemini (ECalifornia)
Isigaba sePitbull (I-New York)
Othembekile waseSiberia Husky (ENingizimu Carolina)
UJalerran waseSiberia (EPennsylvania)
Izinja zomklami ziyaziwa ukuthi zikhona kuyabiza impela , futhi imvamisa kuyisibonakaliso sokunakekelwa kwekhwalithi abazali nezingane abazithola kumnikazi wokuqala noma umfuyi.
Uma othile ekuthengisela yona ngentengo ephansi, kungahle kungabi uphawu oluhle.
Inketho # 2: Pitbull Husky Mix Rescue
Yize kunezinyathelo ezingeziwe okufanele uzithathe ukubheka ukuthi ngabe ziyimixube esemthethweni kaHusky Pitbull, kunamaPitskies amaningi afuna ikhaya laphakade nomuntu ozithandayo.
Qhubeka uhlole ukutakulwa kukaPittie noHusky Yamukela Ukutakulwa Komgodi (EOhio), Ukutakulwa Komgodi Wothando (ITexas), I-Alabama Siberian Husky Rescue, Inc. , I-Raven's Husky Haven nokusindisa (IWisconsin).
Ngeke wazi, kungaba uthando ekuqaleni kokubona nenja endala.
Yize izindleko zehluka ngokuya ngezwe noma idolobha, ukwamukelwa kuyindlela engabizi kakhulu yokuyisa ekhaya inhlanganisela yePitbull Husky.
Ngemuva kwakho konke lokho, ngiyaqiniseka ukuthi uyavuma ukuthi iPitbull Husky Mix noma iPitsky bangenza i- isilwane somndeni esiyingqayizivele nomngane!
Akekho ongathola okwanele ngaleli furball elihle!
Futhi, le hybrid ilungele abanikazi abanjalo iyasebenza , banolwazi lokuphatha nokuqeqesha inja enkulu.
UPitsky uzothanda nokuba sekhaya naye isikhala esanele ukugijima azungeze futhi asebenze yedwa.
Uma uthikha wonke amabhokisi omnikazi okaPitsky ofanelekile, siyakuhalalisela!
Uzojabulela iminyaka eminingi ngalokhu unothando, uthanda ubumnandi, futhi uhlakaniphile unqamule eceleni kwakho.
Ingabe unayo iPitsky? Noma wake wakwazi ukuba ngumnikazi nokuqeqesha okukodwa ngaphambilini? Singathanda ukwazi konke ngakho! Sitshele konke ngokushiya amazwana ngezansi!
Umxube wase-German Shepherd Husky
I-AZ yamagama ezinja (ama-300 + ahlukile, adumile namagama amahle wemidlwane)
Umalusi Omhlophe waseJalimane: Umhlahlandlela Ophelele Wabelusi Abamhlophe Abamhlophe
injana ebukeka njengebhere
malini u-chihuahua onezinwele ezinde
igolide lab vs i-retriever yegolide
inja yezinkomo zase-australia ukuxuba i-heeler ebomvu